Factorylọ ọrụ na-ahụ maka mmiri na China na ndị na-emepụta | Boselan
Enwere ike ekewa GFS tank, ebe a na-ahụ maka ịwa mmiri, ọ ga-adaba adaba ma na-agbanwe agbanwe.
Ọrụ nhazi akwa na akwa akwa GFS
1. Ndi otu okacha amara nke BSL gha enye ndi oru ikacha amara ngwa ngwa ha anata nyocha, hazie okike ha kwekọrọ na AWWA D103-09, na OSHA international enamel bolted tank Design.
2. Na igwe eji etolite elu na enamel spraying line line, ike anyị nwere ike iru 160 Ibé akwụkwọ / ụbọchị, ma gbaa mbọ hụ na mpempe akwụkwọ ọ bụla nwere usoro ịre ahịa dị elu na arụmọrụ mkpuchi kwụ ọtọ.
Iji jide n'aka na ogo ngwaahịa nwere ike izute ụkpụrụ mba ụwa, anyị ga-enyocha nyocha ahụ mgbe ọ bụla usoro nkwupute, dịka ule ezumike 1500V, nnwale mkpuchi, mkpuchi nnwale na ihe ndị ọzọ. Site na nyocha ndị ọrụ QC siri ike, ogo enamel anyị ka akwadoro nke ọma.
Ihe ngwugwu na njem
1. ngwugwu mbupụ ọkachamara maka mbupu nke oké osimiri: akwa ụfụfụ enamel na-echebe site na ụfụfụ PE, wee jiri igbe osisi ma ọ bụ pallet rụọ ya.
2. Ọrụ ụgbọ njem: Na-enwe ike inye ọrụ kacha mma, tankị BSL nwere ike inye aka na nhazi mbupu nke oké osimiri ozugbo ebu.
Nke gara aga: Ngalaba ịsa mmiri
Osote: nchekwa kemịkal
Ọgwụ Digester Tank Wastewater Water
Ọgwụ mmiri Septik
Tank mmiri Ọgwụ Mmiri
Mmiri tank mmiri